Tsara ireny, ary mila miampy aza toy ny Mirage na F16 na hellico, vedette rapide.
Tsy zavatra nofinofy ireny, maro ny firenena afrikanina, na Algerie na Maroc, no manana fitaovana raitra ny Tafika. Azo tanterahina tsara, ny alika sy ny saka rehetra any ivelany misy puce avokoa, ahitana ny momba azy rehetra, tsy lafo ny puce ary veterinaire rehetra mahay mametaka azy.
Mila politika ara-bola mazava koa anefa, satria ilana vola izay, mila mazava koa ny politika ivelany, satria na ny safidy amin'ny fividianana fitaovam-piadiana dia mila ligne diplomatique mazava, rosianina ve sa amerikanina sa frantsay sa israelianina, izay amerikanina ihany izany.
Ny anampiko azy, ary ny amporisihiko ny IEM dia jereo ny fototry ny olana, fa tsy famatsiana fitaovam-piadiana fotsiny ihany.
Tsy manana asa ny olona, mahantra, noana, be kolikoly, ny mpitondra ambony no tena fototry ny asan-dahalo, tsy maty manota ny mpitondra, ny fitsarana feno kolikoly.
Izay no nandrosoako ilay resaka Service National obligatoire ho an'ny tsy an'asa rehetra mba tsy ho feno olona tsy manankatao ka hiafara amin'ny halatra sy fifohana rongony.
Zavatra kihaniko hatrany amin'ny IEM anefa ity fandrosoana ny vazaha ho lohalaharana amin'ny zavatra rehetra atao ity.
Tandremo fa ny Tafika Malagasy dia saropiaro amin'io, ireny endrika naseho omaly ireny ve tsy nety raha Malagasy no natao teo, na dia fitaovam-piadiana raitra aza no nentina.
Sao isika mihevitra fa ny miaramila Gasy dia tsy mahay, mahafantatra tobin-tafika aho fa mandany munition 1 tonne isan-kerinandro manao fanazaran-tena, ary na cible 1000 m aza voany atao par ricocher.
Misy mandiso ihany koa ity resaka hoe fandriam-pahalemana sy sécurité ity. Ny sécurité dia mihoatra lavitra noho io resaka fandriam-pahalemana io. Misy ny sécurité sanitaire, ohatra, ady amin'ny pesta, sécurité alimentaire, ady amin'ny sakafo lany daty, mahafaty, sécurité routière, ny contrôle technique, fanajana ny code de la route...
Ka raha miresaka sécurité izany dia tsy ministère de l'armée izay, fa ministère de la défense nationale, ka tafiditra ao na défense contre le cataclysme naturel, pompier, sécurité civile, hatramin'ny fanapahana hazo sao hianjera amin'ny tranon'olona, na famonjena ny saka miantona eny ambony hazo tsy tafidina.
Mirary soa hatrany, raha misy diso ny teniko, dia ampio ny fanazavanareo fa tsy mbola mipaka izany.
Miandry ny politikan'i Dada ihany koa dia iarahana miady hevitra eo.